Raawwii hojiiwwan qaama raawwachiiftuu naannoo Oromiyaa – Fana Broadcasting Corporate
Raawwii hojiiwwan qaama raawwachiiftuu naannoo Oromiyaa
Finfinnee, Adoolessa 8,2011(FBC)- Raawwii hojiiwwan qaama raawwachiiftuu 2011 naannoo Oromiyaa;
Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan raawwii hojii qaama raawwachiistuu naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii bara baajataa 2012 yaa’ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaa kaleessa Adoolessa 7,2011 eegalerratti dhiyeessaniiru.
1. Rakkoolee mana jireenyaa hiikuuf waldaa ijaarsa mana jireenyaa 2288 kan miseensota 39,056 qabu keessaa 36,636 (89%) lafa argataniiru.
2. Qorannoo poteenshaala invastimeentii gaggeessuun lafa hekt. kuma 50.3 (%67.7) qopheessuun piroojeektoota filatamoo fi bu’aa qabeessa ta’an 27 kaappitaala Birrii biiliyoona 9.6 galmeessisan simachuun lafti hekt. 1.758 akka kennamu taasifamee jira.
3. Carraa hojii miiliyoona 1.1 uumuuf karoorfame keessaa carraa hojii dhaabbii kuma 606.5(%73.5) fi carraa hojii yeroo kuma 386.9 (%100) walumaagalatti hojii barbaddonni kuma 993.3 (%93)f carraa hojii umameera.
4. Uwwisa bishaan dhugaatii qulqulluu bara 2010tti %63.8 irra ture dhuma bara kanaatti %69.5tti ol guddisuuf karoorfdamee %66.13 irraan gahuun danda’amee jira.
5. Misooma jallisii marsaa 1ffaa lafti hek. mil.1.15 misoomuun oomisha jallisii lafa jallisii hek. kuma 918.9 (%80) misoomsuun oomisha kun. Mil. 99.2 ta’u sassaabuun danda’amee jira.
Haaluma walfakkaatuun, jallisii marsaa 2ffaa lafa hek.kuma 425 misoomsuun oomisha kun.mil. 23.8 sassaabamee jira.
6. Hojii kunuunsa biyyee fi bishaanii bal’inaan kan hojetame yommuu ta’u, duula biqiltuu mukaa bil.2 ta’u dhaabuudhaaf qophiin xumuramee hojii sosochii uummataa cimsuuf hojjetamaa jiruun hanga ammaatti biqiltuun mukaa mil. 661.8 (39.9%) dhaabamee jira.
7. Bara kana industiriiwwan 1,494 irratti to’annoo fi hordoffii gaggeeffameen kanneen rakkoo faalamaa naannoo qaqqabsiisan keessaa 244 of eeggannoo jalqabaa, akkasumas, 91’f of eeggannoon dhumaa kan kennameef, yommuu ta’u warshaaleen 33 immoo akka sirreeffaman taasifameera.
8. Hojii qonna gannaa bara oomishaa 2011/12 ilaalchisee lafa hek. miiliyoona 6.1 facaasuun callaa kuntaala mil. 186.4 argamsiisuuf karoorfamee hojiitti galameen hanga ammaatti lafti hektaara mil.2.7 (45%) ta’u midhaan gosa adda addaatiin kan uwwifame yemmuu ta’u, karoora kana galmaan ga’uuf ammallee ciminaan itti deemamaa jira.
9. Manneen barnoota 17,016 keessattii barattoota mil. 9.24 barsiisuuf karoorfame keessaa mil. 9.16 (99.2%) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yommuu ta’u, kanneen keessaa barattooni mil. 4.1 (%45.4) ta’an dubartoota dha.
Hanqina barsiisota manneen barnootaa keessatti mul’atu furuuf qaxarrii barsiisota sadarkaa garaa garaa 12,233 raawwachuuf karoorfamee 11,755 (%96.09) raawwatameera.
10. Haadholee tajaajila dahumsaa dhaabbilee fayyaa keessatti gargaarsa ogeessota fayyaatiin argachuu qaban keessaa haadholeen kuma 774 (%60) tajaajila akka argatan ta’eera.
Dhibeewwan daddarboo kan akka TB, HIVfi busaa ittisuufi to’achuuf hubannoo hawaasaa cimsuudhaan tajaajilli ittisaa fi yaalaa bal’inaan kennamaa jira.
11. Tajaajila haqaa, si’oominaa fi qulqullina qabu akkasumaas bu’a qabeessaa ta’e hawaasaaf kennuudhaan amantaa ummanni keenya sirna haqaafi mootummaa irratti qabu akka dabalu gochuudhaaf qindoomina qaamolee haqaatiin hojiin bal’aan hojjetamaa tureera.
12. Jijjiirama gurmaa’insaa taasifame bu’uura godhachuudhaan ramaddiin hojjattoota mootummaa naannoo irraa eegalee hanga aanaatti beekumsa, dandeetti, naamusaafi raawwii hojii isaaniitiin akka raawwatamu taasifamee jira.
13. Galii diinagdeen naannoo keenyaa maddisiisu guddisuun galii idilee qar. Bil. 15.0, galii mana qopheessaa qr. Bil 3.5 waliigalaan qr. Bil 18.5 walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa tureen galii idilee qar.bil.15.4 (%102.8)fi galiin mana qopheessaa qr bil.3.27 (93.1) waliigalaan qr.bil 18.69 (% 101) sassaabuun danda’ameera.
14. Karoorri bara 2012 bara xumura KGT 2ffaa waan ta’eef, hojiiwwan baroota darban keessatti harca’anii hafan dabaluun, galmoottan gurguddoo misooma biyyaafi naannoo keenyaa milkeessuuf bu’uura ta’an, hojiiwwan gama misooma dinagdee, hawaasummaa, bulchiinsa gaarii, ijaarsa sirna diimokiraasiifi ol’aantummaa seeraa kabachiisuun nageenya naannoo keenya mirkaneessuutiin jalqabaman itti fufsiisuun hojiiwwan ijoo bara itti aanuu ta’a.
Bara karoora 2012tti qonna %46.5, industirii %18.5fi tajaajila %35 irraan gahuuf karoorfamee caasaan dinagdee ce’umsaa akka milkaa’uuf kan hojjetamu ta’a.
15. Hojiin gama du’aatii haadholii fi daa’immanii xiqqeessuuf hojjattame jajjabeessaa ta’us, galma qabame bira gahuuf ammallee hojiin bal’aa ta’e kan hafu waan ta’eef bu’aawwan argaman itti fufsiisuuf carraaqqii cimaan kan taasifamu ta’a.
Bara karoora 2012 keessatti galii idilee qar.bil.17 fi galii keessaa qar.2.98 waliigala qar.bil 19.98 walitti qabuuf karoorfameera.
16. Bara baajataa 2012’f hojiilee karoforfaman raawwachuuf baajatni waliigalaa naannoo keenyaaf karoorfame qar.70.16 yommuu ta’u, kuniis baasii naannoof qar. Bil 32.23 deegarsaa baasii aanaaleefi bulchiinsa magaalotaaf qar. Bil.37.43fi ittiin eeggannoodhaaf qar. Mil.500 akka barbaachisuu kan tilmaamame yommuu ta’u, kuniis sadarkaa naannootti baajatni kaappitaalaa qar. Bil.17.29 (%53.6)fi marmaartuun qar bil 14.93 (% 46.3) ta’a.
CAffeen yaa’iisaatin wixinee labsii baajata dabalataa bara 2011 fi baajata bara 2012 mootummaa naannoo Oromiyaa Birrii biiliyoona 70.16 irratti mari’atee ni raggaasisa jedhameet eegama.
Jilli diippiloomaasii hawaasummaa Ityoophiyaa har’a waaree booda gara Eertiraa…
haabbatichi dhaabbilee idil addunyaa 2 waliin xaa’oo biyyoo deddeebisuuf…
Baahir Daaritti shugguxiin 449 to’atame
Jilli Ityoophiyaa obbo Dammaqaan duurfamu fooramii baqattootaatti hirmaachuuf…
Meedaaliyaan Badhaasa Noobeelii Nageenyaa fi Dippiloomaan…
Yaa’iin Waraana lafarraa biyyoota Afrikaa Baatii…